सूवर्णले संसदमा पेश गरेका त्यो नेपालकाे पहिलो बजेट(पूर्णपाठ) - Banking Khabar
सूवर्णले संसदमा पेश गरेका त्यो नेपालकाे पहिलो बजेट(पूर्णपाठ)
Bankingkhabar /May 29, 2022
बैंकिङ खबर/ २००८ सालदेखि नेपालमा पहिलो पटक औपचारिकरुपमा बजेट घोषणाको शुरुवात भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेर राणाले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
१ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो ।
यस्तो छ पहिलो बजेट
राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी-खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँ प्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ ? केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।
कर्जा नाछेड्नु जम्मा नजोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ । हाम्रा र यहाँ श्रेष्ताहरूमा आधुनिक ढढंले आम्दानी-खर्च बिभिन्न रकमहरू छुट्याइएको थिएन । यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्च संकलित हिसाब तयार गरी बजेट पेश गर्न हामीले धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्न परेको । यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटि हुन सक्छ ।
तर म आशा गर्छु, तपाईहरू ती विघ्नवाधाहरूको विचार गर्न हुने नै छ । बजेट पेश गर्न यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ । त्यसका अनेक कारणहरू छन् । एकतन्त्रीय र सामन्तवादको ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्त होइन । यस्तो परिवर्तन साथ-साथै रहेका मुलुकमा अनगिन्ती विघ्नबाधा र समस्याहरू आइपर्न इतिहाससिद्ध कुरा हो । हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो ।
प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्षपछिसम्मको विचार पुर्‍याउनु पर्दा यो बजेटको साथसाथै सर्वधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ । अर्को बजेट आगामी बैसाख अगावै पेश हुनेछ र सो एक वर्षको निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरूका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु । अन्तिम सरकार खडा हुनुअघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्झिइन्थ्यो ।
त्यस्तै २००७ सालको कूल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन । २००८ सालको निम्ति अंक सकलन गर्न पनि यिनै आधारहरूको सामना गर्न परेकोले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चको अंकहरू ठीक–ठीक छन् भन्न सकिँदैन । फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न वा खर्चगर्न विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ट दिइन्थ्यो । यसको परिणाम स्वरुप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरुको तजबिजमा रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दा पनि यर्ता बाँकी रकमहरूको राम्रो विवरण पाउन सकिएन । यसको अर्थ नतिजा मन्त्रालयहरू र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरूले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना खर्च गर्न पाएन ।
३, २००८ सालको बजेट इस्टिमेटः मैले ३ प्रकारको विवरण तयार गरेको छु ।
सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरणः- २००८ को सामान्य आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० (तीन करोड पाँच लाख सोह्र हजार रुपैयाँ) आर्जन गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा रु. १४,३५,००० (चौध लाख पैँतिस हजार रुपैयाँ) बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ । २००७ सालमा मालपोतबाट रु. १,१९,१६,००० (एक करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार रुपैैयाँ) उठ्ती भएकोमा यो साल रु. ९४,०५,००० (चौरानब्बे लाख पाँच हजार) उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ । यस साल मालपोत घट्नाको कारण निम्न लिखित हुन् ।
(ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु । मालपोतबाट हुने उपलब्धी घट्ने गए तापनि अरु कुनै–कुनै रकमहरुको आम्दानी बढ्ने अन्दाज गरिएको छ । मुख्य आम्दानी वृद्धिहरू यी हुन् ।
४, विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरणः
यो विवरणमा मैले विशेष CAPITL शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन । यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरु आम्दानी र मौज्दातहरू देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्च भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो । अर्को अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो । राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको शेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा रु. ७,९०,४६,२५८ (सात करोड नब्बे लाख छयालिस हजार दुई सय अन्ठाउन्न) मौज्दात छ ।
यिनमा कुनै ता पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन् । यसकारण मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको “मुद्रा समर्थ कोष” दुई करोडको विनिमय व्यवस्था र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरू खडा गरेर मैले साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु ।
हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरूमा गरी जम्मा रु. २५,७९,००० (पच्चिस लाख उनासी हजार) मौजदात छ । यी दुई रकमहरू जोड्दा रु. ६२,२८,००० (बैसठ्ठी लाख अठ्ठाइस हजार) पुग्दछ । अब रु १,०६,१८,००० (एक करोड छ लाख अठार हजार) नपुग हुन आउँछ । साल तलामीलाई तीन महिनामात्र छ । यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका रकमहरू सबै खर्चहोला जस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्‍याउन कुनै खास प्रबन्ध गर्न पर्न देखिँदैन । आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरूको पछि उल्लेख गर्नेछु । त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्नगई नपुग कम हुनेछ ।
(२) आम्दानी बढाएर बजेट निकासा गरिएका कुनै रकमहरू पटके किसिमका छन् । हामीहरूले शासन प्रवन्धमा आमूल परिवर्तन गर्न र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मारीहरूको समस्यामा सकेसम्म किफायत गर्न विचार गरेका छौं । तर जनताको जीवनस्तर बढाउने र अनेक सुविधाहरू पु¥याउने नेपाली काङ्ग्रेसको दृढ नीति भएकोले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्था उपर भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्ने छ ।
मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ । यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ । यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नु पर्दा । आउँदो केही साललाई टेलिफोन, आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नुपर्ने देख्तछु ।
सवारी कर पनि बढाउने सोच्दैछु । वन व्यवस्था राम्रोसँग सुधार्न प्रबन्ध हुँदैछ र यसबाट पनि साविकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ । शिक्षातर्फ मुलुकभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक, उच्चकक्षा तथा कलेजका छात्रहरूबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ । शिकारमा लाइसेन्स दस्तुर हात हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्ने छ । मैले प्रजातन्त्र र्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु । यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ ।
अन्त्यमा म राष्ट्रिय सञ्चय योजना चालु गर्न प्रस्ताव गर्दै यो योजनाअनुसार निम्न लिखित ब्याज पाउने गरी रु १०, २५, १००, १०००, ५००० र २५००० सम्म प्रमाणपत्रहरू निकालिने छन् । एक वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ३, ५, ब्याज दुई वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ३.५५, ब्याज ३ वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ४.५, ५, ब्याज पाँच वर्षपछि भुक्तानी लिनेभए आयकर मुक्त ५ ५, ब्याज ।
यस अवसरमा म सर्वसाधारणलाई सुनाउन चाहन्छु । सरकारले श्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सभापतित्वमा एउटा योजना र विकास समिति राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरू र गैरसरकारी व्यक्तिहरू पनि रहने छन् । यो समिति विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आएका आयोजनाहरूको मिलन गरेर तिनको अग्राधिकार बारे सिफारिस गर्न मात्र नभई सामान्य नीति र आगामी तीन देखि पाँच वर्षमा कार्यक्रमको सुझाव दिने छ ।
७, जुनसुकै देशको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो राख्न आम्दानीको उठ्ती र खर्च अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण रहनु अत्यावश्यक छ । कुमारी चोक आदि हिसाब राख्ने र जाँच्ने अड्डाहरूको पुनर्गठन हुन लागेको छ । मुलुकी खाना, तीन साँचा र मालहरूमा र्याहा श्रेर्ता राख्ने तरिकामा सुधार गर्नर स्थानीय हिसाब जाँच अड्डा खडा गरी सुरुमै आर्थिक अनियमितता पत्ता लगाई तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउने उचित कारबाही गराउनका निमित्त अकाउण्टेण्ट जनरलको नियुक्ति भइसकेको छ ।
अडिटर जनरलले पनि सरकारी आम्दानी खर्च ठीक-ठीक भएको छ छैन हेर्ने छन् । मन्त्रिमण्डलबाट स्वीकृत आर्थिक नियमले विभिन्न अधिकारीहरूलाई निकै नै आर्थिक अख्तियारी सुम्पेको छ । जो हाम्रो मुलुकको निमित्त अभूतपूर्व कुरा हो । यो अख्तियारी भन्दा बढी जुनसुकै अधिकारी वा मन्त्रालयसमेतले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै किसिमको खर्च गर्न पाउने छैन ।
देशको आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्नयो नियम सख्त तवरसँग चालु गराउन सरकार कटिबद्ध छ । यसका निमित्त म मेरा सहकारीहरूको मात्र हैन, मुलुकभरका सरकारी कर्मारीहरूको पूरा र हार्दिक सहयोग पाउने आशा राख्दछु । मन्त्रिमण्डलबाट योजनाहरूको विस्तृत विवरण तयार भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालय जसको लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रस्तुत बजेट इस्टिमेटमा निकासा गरिएका रकमहरू खर्चगर्न पाउने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्र धन खर्च गर्दा सकेसम्म विचार पुर्‍याउने सरकारको नीति छ । यस्तै होस भर्नाको निमित्त मन्त्रिमण्डलको अर्थ समितिले प्रत्येक महत्वपूर्ण योजनालाई एक–एक केलाएर हेरी अग्राधिकारको निर्णय गर्न छ । प्रस्तुत बजेटको एक विशेषता यो छ कि बजेटमा निकासा गरिएका रकमहरू कार्यानुकुल बजेटमा बाँडिने छन् ।
खर्चको निकासा दिँदा कामको रेखदेख पुर्‍याउनु र सञ्चालन गर्न नभईनहुने मूल अड्डाहरूको खर्च बाहेक अरु खास योजनाहरुको निमित्त मात्र कार्यानुकूल खर्च निकासा हुनेछ । यस तरिकाबाट सालवसाली कर्मचारीहरू बढाउँदा हुने अपव्यय रोकिई खर्चमा पूरा नियन्त्रण रहने र योजनाहरू पनि चाँडो कार्या्न्वित हुने आशा गरिन्छ ।
८, केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलले राज्य ब्याङ्क खोल्ने निर्णय गरेको र हाम्रो सरकारको निमन्त्रणामा भारतको रिजर्भ ब्याङ्कका श्री रामनाथ र श्रीपाई काठमाडौँ आए । उनीहरूसँग हामीहरूले मन्त्रिमण्डलको निर्णयलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्न उक्त तरिका र मुद्रा सटही तथा कर्जा र बजेट इत्यादिसँग सम्बन्धित अनेक विषयहरूमा छलफल ग¥यौँ । सरकारले चाँडै नै उपरोक्त राज्य ब्याङ्क खोल्ने आशा गरेको छ र भारतीय मुद्रा तथा नेपाली मुद्राको सटही दरमा भइरहने अतिशय घटीबढीलाई नियन्त्रणमा राख्ने दृढ निश्चय गरेको यो ब्याङ्कले सरकारी मौज्दात राख्ने र अरु काम पनि लिने छ ।
सर–सल्लाहका निमित्त श्री रामनाथ र श्रीपाईलाई पठाइ दिएकोमा म भारत सरकारको कृतज्ञ छु । श्री रामनाथलाई वहाँको बहुमूल्य सुझावका निमित्त धन्यवाद दिन्छु । राष्ट्रको आर्थिक स्थिति ब्याङ्कसम्बन्धी कार्यबाही सुव्यवस्थित गर्नमा राज्य बैंकको स्थापना अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।
९, हामीले सामना गर्न पर्न विघ्नवाधाहरू धेरै छन् । ती मध्ये एउटा त आधुनिक शासन बुझेका र विविध विभागहरूको काममा तालिम पाएका कर्मचारीहरूको अभाव हो । हामीसँग विभिन्न कामहरूका निमित्त चाहिने उच्च कोटिका विशेषज्ञ र व्यवसायिक निपूर्णता प्राप्त मानिस पनि चाहिए जति छैनन् । यसकारण हामीले भारत तथा अन्य देशमा तालिम पाएका मानिसहरू पु¥याउने प्रयत्न गरेका छौँ र र्वायन्ट फोर प्रोग्राम कोलोम्बो इत्यादि विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहायता योजनाहरूबाट सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छौँ । राष्ट्रको नव निर्माण गर्न पर्न भएकोले हामीलाई उकालो परेको छ । अतः आफ्ना जनताले उचित शिक्षा र तालिम पाएका मानिसहरूको अन्य मुलुकबाट सहायता माग्नु आवश्यक छ । अरु देशहरूले पनि त्यस्तै किसिमबाट खाँचो टारेका हुनाले तालिमी मानिसहरूको सहायता माग्नु हामीले लाज मान्नु पर्न कारण छैन । अर्को समस्या भौतिक साधनहरूको छ ।
यद्यपि हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका खनिज र तिनबाट ठूलो लाभ उठाउन सकिने प्रशस्त गुर्जायस छ । तथापि हामीलाई कलपूर्जा सरसामान र अरु आवश्यकीय चिजबिजका निमित्त अरु देशको भर पर्नु परेको छ । दोस्रो समस्या पैसाको छ । मैले आम्दानी बढाउने विभिन्न उपायहरूको सुझाव राखेको छु र जनता राष्ट्रिय सञ्चय योजनालाई उदारतासित अपनाउने छ भन्ने आशा गर्दछु ।
तर हाम्रो विकास योजनाहरूको लागि हामीले पूँजीको तत्काल आवश्यक छ । यसका निमित्त आफूसँग पर्याप्त साधनहरू नहुनाले बाहिरबाट सापट लिनु पर्ने छ । हालै हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्री र अरु केही मन्त्रीहरू भारतका प्रधानमन्त्री र उहाँका अधिकारी वर्गंग दुवै देश सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्न दिल्ली जानु भएको तपाईंहरूलाई विदितै छ ।
हामीले त्यहा पूरा सहानुभूति र पैसा सर–सामान तथा विशेषज्ञहरूको रुपमा ठोस सहायता पाउने आश्वासन पाएको तपाईहरूलाई सुनाउन पाउँंदा मलाई खुशी लागेको छ । अब हामीलाई चाहिने वास्तविक सहायताको विस्तृत विवरण तयार गर्न काममा हामी लागेका छौँ र चाँडै नै भारत सरकारसित यसबारे कुरा मिलाउने आशा गछौं । यो आर्थिक सहायताको आश्वासनका साथै भारतले कुनै बन्धन राखेको छैन भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
आर्थिक र विशेष सहायता लिँदा कुनै किसिमले पनि हाम्रो स्वतन्त्रता र मुलुकको प्रभुसत्ता ९क्यखभचभष्नलतथ० सरकारले मञ्जुर गर्ने छैन । यो सरकारको दृढ सिद्धान्त छ । हामीलाई खाँचो परेको बखतमा सहायता दिन अग्रसर भएको भारत सरकारलाई धन्यबाद दिँदा तपाईंहरू सबै मसँग सहमत हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु । अब सरकारको आर्थिक नीति बारे म केही भन्न चाहन्छु । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहत्तर पार्न सरकारको उद्देश्य छ ।
यो लक्ष्य पुर्‍याउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्थासम्बन्धी सारा कार्यक्षेत्रलाई ढाक्ने विचार पूर्व सम्पूर्ण कार्यक्ररम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ । अमिल्दो र मनपर्दो कार्यहुन दिने छैन । हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई विलकुल थोरै समयमा र्यादामा र्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिने छ । गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रीत आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति लिएको छ । कुनै व्यक्ति वा वर्गबाट अर्काको शोषण रोक्ने साराका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्न र धनको न्यायसङ्गत वितरण गर्न सरकारको निर्धा्रित नीति छ तापनि निजी उपयोग र व्यापारका निम्तिसमेत प्रशस्त गुर्जायस रहनेछ । भई रहेको सम्पतिलाई बराबरीमा पु¥याई वितरण गर्न भन्दा बढ्ता मुलुकका साधनहरूको विकास गरेर सम्पति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ भन्ने मान्दछु ।
तर मुलुकको सम्पति बढाउँदा धनी र गरिबका बीचको अन्तरलाई झन् बढ्ने नदिई क्रमशः साँघुरो पार्दै ल्याउनु पर्छ दीन–हीनमाथि विशेष दृष्टि पु¥याउनु पर्छ सुरुमा एकैपल्ट धेरै काममा हात हाल्नु भन्दा साना–साना काम थाल्नु बढी राम्रो हुन्छ । हाम्रो मुलुकको अहिलेको अहिलेको खास अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु र साना–तिना उपयोगहरूको विकास गरेर तिनलाई ठूलो उपयोगसित सम्बन्धित गर्न सरकारको नीति छ । हामीहरू थोरै सहरमा मात्र अनेकौँ उपयोगहरूलाई केन्द्रित हुन नदिई तिनीहरूलाई सकेसम्म सर्व्र छरेर राख्ने कोशिस गर्ने छौँ ।
१०, माथिको छोटकरी निरीक्षणबाट हाम्रो आर्थिक स्थिति खदिलो छ र नयाँ पद्धतिमा पुनर्गठित हुन लागेको शासन प्रबन्धमा निकै सुधार हुँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । हामीले तलबका नयाँ शर्तहरू निकाल्न लागेका छौँ । अब हाम्रो निजामती नोकरीले राम्रो जीवनवृत्तिको निश्चिर्ताका साथै उचित कदर पाउने छ । काठमाडौँ आउने मूलबाटो बनाउने योजना पूरा हुन आँटेको छ र चाँडै नै निर्माण कार्य सुरु गरिने आशा छ ।
गौचरको विमान अवतरण भूमि अरु हवाई अड्डाहरुमा जस्तै पक्का गराइन लागेको छ र विराटनगर, पोखरा इत्यादि अवतरण भूमि तयार भइ सकेको छ । केही विकास योजनाहरूका काम पनि थालिएका छन् र घरेलु उपयोग, सिंचाई तथा भूमि व्यवस्था र कृषिमा विशेष जोड दिइएको छ ।
आम्दानीको माया मारेर पनि हामीले कृषक वर्गलाई प्रशस्त सहायता दिइसकेका छौँ । विर्ता र बेठ बेगार प्रथाको खारेजीबाट कृषकहरूलाई आफूले कमोद गरेका जग्गाहरू उपर भोगाधिकार प्रदान गर्न भएबाट कृषकहरूको अवस्था अझ बेहत्तर हुनेछ । कृषि, सुधार कमिशन पनि खडा गरिएको छ । जनसंख्या लिने र मतदाताको नामावली तयार गर्न बन्दोवस्त पनि करिब–करिब सिद्धिन लागेको छ । आउँदो सालको आधाआधीमा चुनाव होला भन्ने आशा गरिएको छ । जनताले वाक स्वतन्त्रता, सङ्घ स्वतन्त्रता, इच्छाअनुसारको पेशा लिने अधिकार इत्यादि मौलिक हक पाइसकेका छन् । स्वतन्त्र कार्यालय स्थापना गर्न र अन्तरिम विधान अनुकूल ऐन सङ्ग्रह र संशोधन गर्न काम पनि सुरु भइसकेको छ ।
एक किसिमले सबै कामको सिर्जना नै गर्न पर्ने भएता पनि अन्तरिम सरकारले धेरै क्षेत्रहरूमा शिलान्यास गरिसकेको छ । तर अझै गर्न धेरै नै बाँकी छ । राष्ट्र निर्माण हुने सजिलो काम होइन । नवीन नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर बढाई अरु उन्नतशील राष्ट्रहरुको दाँजोमा पु¥र्याउन केही समय लाग्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । यस्तो महान कार्यसम्पादनको निमित्त प्राकृतिक साधन, जन र धन मात्र होइन कि धैर्य उत्साह र सरकार र जनतामा परस्पर पूर्ण सहयोग हुनु पनि अवश्यक छ । यही उद्धेस्यानुसार सल्लाहकार समिति चाँडै नै बस्ने भएको छ । तर म यहाँ तपाईहरुको ध्यान एक बहुतै आवश्यकीय कुराप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु । कुनै देश वा राष्ट्र पनि शान्ति र अनुशासन वेगर उन्नति पथ बढ्न सक्दैन ।
यहि माघ ८ गते बुधबार रातिको जस्तो आतङ्की प्रतिक्रिया र अवसरवादीहरूको अवैध कुचेष्टाले देशको प्रगतिमा बाधा दिन्छ । त्यसैले म हाम्रो मातृभूमिको हरेक व्यक्ति र वर्गसँग जोडसाथ अनुरोध गर्दछु कि शान्ति र अनुशासन कायम गर्नमा सबैले सरकारलाई सहयोग दिने यो एक प्राथमिक स्थिति देशमा कायम भएमा हामीहरू उन्नति र समृद्धिको मार्गमा प्रतिदिन लम्कदै जाने छौँ भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर शङ्का छैन । जय नेपाल !